EA041 - OMG 2 na 1 Nọọsụ ikuku na-akpọ sistemụ mkpu, 52 chimes, 4 olu na-agbanwe agbanwe, bọtịnụ 1 + bọtịnụ SOS | Ngwọta OMG
Mgbapụta Mgbapụta Ahụhụ Mgbapụta Ahụhụ Maka Mgbapụta Ahụhụ maka Ahụhụ maka ndị agadi (Office, Homelọ, Ọrụ & Hospitallọ Ọgwụ) Okenye ọdịda nke okenye, bọtịnụ ụjọ mberede, & Ngwọta Na-agagharị (Singapore / Jakarta)
Igwefoto Nledo Igwe (Nchedo Ụlọ)
Spy Audio edekọ
EA041 - OMG 2 na 1 onye na-elekọta ụlọ na-akpọ sistemụ mkpu, 52 chimes, olu olu mgbanwe nke 4, ndị na-anabata 1 + bọtịnụ 2 SOS
2 na 1 Nurse na-akpọ usoro mkpuchi, na-elekọta System mkpu maka ụlọ / ndị agadi / nkwarụ / ime
Nka na ụzụ nkọwapụta Isi / nata Push Button SOS Button
ike ọkọnọ DC 6V (batrị CR123A * 2) DC 3V (batrị bọtịnụ 2032 * 2) DC 3V (batrị bọtịnụ 2032 * 2)
Mpịakọta 90dB / /
Mpịakọta ụda Ngozi 4 / /
Kwadoro ugbu a 170UA / /
Oge ikuku 868MHz 868MHz 868MHz
-10- + 55 Celsius C -10- + 55 Celsius C -10- + 55 Celsius C
Ikuku igwe ≤300m (na oghere oghere) ≤300m (na oghere oghere) ≤300m (na oghere oghere)
waterproof Mmiri mmiri Mmiri mmiri Mmiri mmiri
Onye natara anyị na-enye ikike site na ike ịchekwa batrị CR123A (gụnyere) nke oge ndụ nwere ike ịdịru ruo 365 ụbọchị. Enwere ike iji ma chekwaa ego gị. Ị gaghị achọta otu ihe ahụ n'ahịa.
52 Ụda olu ụda ama na 4-Ọkwa nke adjustable vọ bụ: Egwu ụwa a ma ama maka ịhọrọ site n'ụdị ọnọdụ dị iche iche; Nchịkọta 4 nke olu nwere ike ịgbanwe site na 0db-90db
Batrị akwadoro na obere ume ike: ọ nwere ike ịrụ ọrụ na ọnọdụ njikere maka ihe karịrị 1 afọ.
Gburugburu nke ọma N'ihe dị na ya: Ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na onye na-anata (onye isi) ga-eme ka mgbanaka ụda + ụda mgbe ịmalite bọtịnụ push ma ọ bụ bọtịnụ egwu, ị gaghị echefu ihe merenụ, nke kachasị adaba maka ndị na-egeghị ntị.
Ntughari dị mfe ma dị mfe: Enweghị wires achọrọ, ngwaahịa niile nwere ike ịdakwasị site na nkedo a ma ọ bụ site na mkpado na mgbidi. Okpute Ntaneti oku na-adighi obere ka eji eyi dika akwa, ebu na akpa, ma obu tinye ya na akwa, ma obu na i nwere ike iburu ya ebe obula.
Nso nke ngwa: Ị nwere ike iji ya na ụdị ntọala dị iche iche dị ka ụlọ, ụlọ nkwari akụ, ụlọ ọrụ, ụlọ, obodo, ụlọ akwụkwọ, ụlọ nkwakọba ihe na ihe ndị ọzọ.
Bọmbụ SOS Panic: Ọ dị mma ma onye na-elekọta ma onye nwere ndidi ma ọ bụ okenye / onye bi / onye nwere nkwarụ / ọrịa. Ọ na-enye ha ohere ịkpọ maka enyemaka n'ụlọ. Okwesighi ka ị na-akwa ákwá iji nweta Ntị nke Onye. A na-echebara onyinye maka ezinụlọ gị agadi nne ma ọ bụ na-arịa ọrịa.
Nzuzo 5362 12 Echiche Taa
EA046 - OMG Wireless Calling System na…
OMG Calling Nọọsụ Ekwentị Ndị Dị Ego Dị Ego Dị ala [EA008-CMU]
EA040 - OMG 3 na 1 Nọọsụ Nlekọta Ndị Nlekọta…
EA039 - OMG Wireless Prising Pọt Button…
EA038 - OMG Wireless Prising Pọt Button…
EA037 - OMG Wireless Prising Pọt Button…
EA013 - OMG Ikuku Nlekọta Ahụike Mkpuchi Mkpọ Ahụ…